Etu ị ga - esi họrọ ezigbo nkesa iji mee ka ihe ịga nke ọma n’ọrụ gị | Site na Linux
La oria ojoo agbanweela otu esi eme ihe, site n'ụzọ nke mmụta, n'ụzọ ọrụ, site n'ụdị azụmaahịa. Kama nke ahụ, ọrịa a na-efe efe abịa iji mee ka mgbanwe nke ihe a na-apụghị izere ezere mee ngwa ngwa. Yabụ, ma inwere ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ị na-arụrụ onwe gị ọrụ, ikwesiri iche maka ịhọrọ ezigbo ihe nkesa nke iji mee ka azụmahịa gị ka ọ dịkwuo mma.
N'ezie, otu nnukwu akụkụ nke enyemaka Europe na-ezube iji nyere ụlọ ọrụ aka mgbanwe ntanetị. Otu ụzọ iji mee ka ha nwee asọmpi ma kwaga na asọmpi asọmpi na-arịwanye elu ebe ojiji nke teknụzụ ọhụụ nwere ike ịpụta ọdịiche dị n'etiti ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda.
1 Achọrọ m nkesa maka ọrụ m?
2 Uru nke ịhọrọ ezigbo sava
3 Otu esi choputa oru di nma
Achọrọ m nkesa maka ọrụ m?
Wa na-agbanwe, nnukwu nyiwe dịka Amazon na ọrụ ntanetị ndị ọzọ na-ewere akụkụ dị ukwuu nke ndị ahịa ma e jiri ya tụnyere ọrụ ọdịnala. Ya mere, ọ dị mkpa ka ịmegharị azụmahịa gị na oge ọhụrụ, dịka ịtọlite ​​a e-commerce weebụsaịtị site na nke ị ga - enweta ọtụtụ ndị ahịa (ọ bụghị naanị ndị obodo).
O nwekwara ike ịbụ ezigbo echiche digitize ụfọdụ ọrụ gị, nke na-enye ndị ahịa gị na ndị ọrụ ya aka ịrụ ọrụ arụmọrụ site na ebe ọ bụla, na-enye nkasi obi ka ukwuu. Ma ọ bụ ị nwedịrị ike ịbịanye ihe ị na-eme site na weebụsaịtị ma ọ bụ blog.
Nke ọ bụla, uru nke inwe sava enwere ọtụtụ:
Nke ka mma nnakọta data maka nyocha na Big Data, wdg. Wayzọ na-atụ anya mgbanwe na mmasị ndị na-azụ ahịa, iji nyochaa oke oge, ịga n'ihu, iji maka usoro ịre ahịa, wdg.
Ike ka mma mkpebi ekele maka nyocha data ndị ahụ. Na-enweghị ha, ịnwere ike ịnwe usoro na-ezighi ezi na ọrụ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị.
Nke ahụ pụtakwara ikike mmeghachi omume ka ukwuu ka mgbanwe ahịa. Ihe dị oké mkpa n'ụwa nke asọmpi na ọchịchọ dị otú ahụ iji gbanwee ngwa ngwa na ngwa ngwa na mgbanwe nke ọnọdụ.
Mfe nfe, na-ewepụ ụfọdụ ihe mgbochi ma ndị ọrụ ma ndị ahịa. Dịka ọmụmaatụ, n'usoro ọrụ nchịkwa, usoro arụ ọrụ, wdg.
Kwalite arụpụta ihe iji ngwa dijitalụ na ngwa. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu ìgwè, enwere ike ịhazi ha nke ọma site na iji ụdị nyiwe mmekọrịta ndị a.
Se ọrụ gbasaa. Nke a na - enye gị ohere ịrụ ọrụ n’ebe ọ bụla ịchọrọ, yana site na ngwaọrụ dị iche iche. Ihe di nkpa iji gbochie mgbochi nke oria ojoo a.
Mbelata ego mgbe ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịbupụ akụkụ / azụmahịa gị niile gaa n'igwe ojii kama ị ga-ahụ ya, ịnwere ike ịchekwa ụgwọ dị ka mgbazinye ogige, ụgwọ ọrụ, wdg.
Ọbụghị naanị na enwere ụgwọ belata, ị nwekwara ike abawanye uru. Ọbụna ma ọ bụrụ na nke ahụ emeghị ozugbo, ọnụahịa nwere ike belata na oke n'akụkụ iji dọtakwuo ndị ahịa.
Mgbasawanye azụmahịa, inwe ike iru site na netwọk mba na mba.
Meziwanye onyonyo nke akara ma ọ bụ ọrụ gị tupu onye ahịa / onye ọrụ. Na mgbakwunye, na yana nkasi obi ka ukwuu, nwere ike inye aka ijigide ndị ahịa.
Ya mere, i kwesịghị ida ohere iji mee ka azụmahịa gị ka ọ dị ọhụrụ ma ọ bụ nyekwuo ọrụ gị ohere ịntanetị.
Uru nke ịhọrọ ezigbo sava
Nhọrọ dị mma bụ ịmalite jiri VPS (Virtual Private Server), ma ọ bụ mebere onwe nkesa na-. Ofdị igwe mebere nke na-enye gị ohere ịnwe "nkata" gị na sava anụ ahụ yana uru ya ma e jiri ya tụnyere sava ndị ọzọ na-agba nkịtị ma ọ bụ ndị raara onwe ha nye. Dị ka ọmụmaatụ:
Barato: You gaghị enwe ike idobe ihe nkesa gị, kama kwụọ ụgwọ maka ọrụ ahụ ma hapụ ụlọ ọrụ na-ebubata ngwaahịa na-akwụ ụgwọ nke oriri, ndozi, ma ọ bụ ndozi.
mgbanwe: na-enye gị ohere ịhazi sava ahụ n'ụzọ dị mfe iji gboo mkpa gị. Ọbụna ụfọdụ na-ekwe ka nrụnye akpaghị aka nke ụfọdụ nyiwe dịka WordPress, Drupal, Magento, PrestaShop, Shopware, wdg, na-enweghị iji aka gị mee ya na enweghị amamịghe teknụzụ. Ọ bụ ikpe nke IONOS echekwa sava sava.
Nnweta: ụdị sava a nwere ezigbo nnweta. N'ụzọ ahụ, ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ ọtụtụ oge, na-enweghị ọdịda ọ bụla nke ga-eme ka ị tufuo ego na ndị ahịa. Ejirila ụfọdụ ọrụ na teknụzụ kachasị sie ike maka nke a, dịka GNU / Linux sistemụ arụmọrụ, sọftụwia izizi VMWare maka HA, Wdg
Nchebe: ngwugwu na nchekwa nke sava ndị a na-enye gị obi ike.
Ike n'ezi- basedbụ dabere na ejighi oru diski (wakporo), ị ga-ezere data ọnwụ. Ha ga-anọ n’igwe ojii.
Na usoro nke ngwa nke ụdị VPS a, ịnwere ike ịwụnye site na ibe weebụ dị mfe iji nye ọhụhụ maka azụmaahịa, iji mejuputa ikpo okwu nke e-commerce (ire ere n'ịntanetị), blọọgụ iji nweta ego ma ọ bụ jiri ya dị ka ihe na-adọta uche, jiri ya dị ka igwe ojii, yana jiri ụdị ngwa weebụ ndị ọzọ maka mkpa gị ...
Otu esi choputa oru di nma
O doro anya, sava niile anaghị enye otu. Ọ bụghị ha niile bụ otu, ọ dịkwa dị mkpa ịhọrọ ezigbo ihe nkesa. Nche, nnweta, ma ọ bụ ịrụ ọrụ ga-adabere na ya. Isi ihe ma ọ bụrụ na ịchọghị ka ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa nwere ike ịtụ ụjọ n'ihi na webụ na-agbada, n'ihi na ọ dị nwayọ nwayọ ruo mgbe ọ chọsiri ike, wdg.
Ka ịhọrọ nkesa kachasị mma, ịkwesịrị lee isi ihe ndị a:
vCPU- Ọ dị mkpa na ị nwere ezigbo ọnụọgụ nke raara onwe ya nye CPU cores. Ndị ọzọ, ọ ka mma ịrụ ọrụ ahụ, ọ bụ ezie na ihe niile ga-adabere na mkpa gị.
RAM- Nnukwu ebe nchekwa dị mkpa dịkwa mkpa iji mee ka ọ na-aga nke ọma.
Nchekwa: ọ bụghị naanị na ikike dị, nke ga-abụ ihe mgbochi maka ịchekwa faịlụ gị, ọdụ data, wdg, mana ọ dịkwa mkpa ka ha bụrụ diski SSD, nke ga-enye ọsọ ọsọ ọsọ karịa HDDs.
Netwọk okporo ụzọ: Ọ dị mkpa na ọ nwere ọnụego kachasị elu ma ọ bụ na enweghị njedebe. Nke a na-ekwe nkwa na ndị ga-ejikọ weebụsaịtị gị ma ọ bụ ọrụ gị nwere ike ịme ya n'enweghị mmachi kwa ọnwa.
Usoro njikwa: ọ na-abụkarị Windows Server ma ọ bụ GNU / Linux. Ubuntu Server, CentOS, Debian, OpenSuSE, wdg. Distros na-enye nkwụsi ike, ike, na nchekwube, agbanyeghị na ọ ga-ekwe omume ịhọrọ Windows na ụfọdụ ọrụ (ọ bụrụ na ịchọrọ usoro Microsoft maka otu ihe kpatara ya)
Nnweta: sava kwesịrị ịbụ ihe siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya dị ka o kwere mee. Nnweta nwere ike ịlele oge ihe nkesa ga-abụ oge. Na nso nso 100% ọ bụ, nke ka mma (dịka ọmụmaatụ, 99,99% bụ ezigbo ọnụego). N'ụzọ ahụ, ị ​​ga-ebelata oge ọrụ a bụ "ala".
Nche: ọ dị mkpa ịhọrọ ọrụ na-enye nchebe firewall, asambodo SSL, IPS / IDS, SIEM, ndabere (mbipụta ndabere), wdg.
Ọrụ ndị ọzọ: dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịnwe ndị enyemaka iji wụnye nchịkọta dịka WordPress, Drupal, wdg, ma ọ bụ nye gị ọrụ adreesị ozi-e, ndebanye aha nke onwe, wdg. Ihe a niile ga - ewepu oru gha eme ka odi nfe kariri gi ime ihe ekwesiri ichoro.
Ahịa: ọnụego dịkwa mkpa iji nweta ọrụ kachasị mma dịka ogo ya / ọnụego ya si dị.
Ọrụ nka na ụzụ: mma ma ọ bụrụ na ọ bụ ọrụ 24/7 na Spanish. N'ụzọ dị otú a, ị ga-atụkwasị obi na enyemaka mgbe ọ bụla ị chọrọ ya iji dozie nsogbu nwere ike ịdapụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Netwọk / Sava » Otu esi ahọrọ nkesa ziri ezi iji mee ka ihe ịga nke ọma n’ọrụ gị